Israel oo ku eedeeyay Syria iyo Iiraan Banaan Baxyo ka dhacay… – SBC
Israel oo ku eedeeyay Syria iyo Iiraan Banaan Baxyo ka dhacay…
Maamulka Yahuuda ayaa ku eedeeyay Iiraan iyo Syria in ay ka dambeeyeen Mudaaharaadyadii uu khasaaraha ka dhashay ee Koonfurta dalka Lubnan,gaar ahaan buuraha Joolaan ee xadka ku yaala.
Sarkaal u hadlay Ciidamada Yahuuda ayaa sheegay in banaabaxyadu ahaayeen kuwo qorsheysan oo ay soo abaabuleen dad kasoo gudabay xadka ay Syria la wadaagaan.
In ka badan 12 qof ayaa la sheegay in ay Ciidamada Yahuuda ku dileen dadkii ka qayb galayay banaabaxa maalinta Nakba,waxaana kaloo jira tacadiyo xoogan oo ay maamulka Yahuudu u gaysteen rayidka Falastiinyiinta,gaar ahaan ku sugan deegaanada ay gacanta ku hayaan.
Mudaaharadayaal badan ayaa isugu soo baxay wadamo badan oo dalalka carabta ka tirsan,waxaana intooda badan ay ka caraysnaayeen qaabka ay Isreal ula dhaqantay shacabkii maalintii shalay ku madaaharaadayay maamulkooda.
Dabaaldega maalinta loogu magacdaray Nakba ama Catastrophe ayaa ah maalin ay Yahuudu u taqaan maalinta xoriyada ay qaateen, iyadoona falastiinyiintu ay u yaqaanaan maalintii dhulkooda laga qaaday.
Raysal Wasaaraha Yahuuda Benyamin Natanyahu ayaa ku tilmaamay arintii ka dhacday deegaanka buuralyda Golan Heights in ay tahay dagaal lagu soo qaaday dalkooda,waxaana uu sheegay in ay yaqaanaan qaabka laysku difaaco.